လူမိုက်နှင့် မပေါင်းသင်းခြင်းသည် မြတ်သောမင်္ဂလာပါတဲ့……။
လိုဏ်ခေါင်းကို ဘယ်လိုတူးမယ်….လူကိုသက်ပြီးမှ ပစ္စည်းခိုးသင့်တယ်…စသည်စသည်နဲ့ ခိုးသူတွေညတော်တော်များများလာရောက်တိုင်ပင်ကြလေရဲ့။ သူတို့ပြောနေတဲ့ အသံတွေကို မင်္ဂလာဆင်က တိုင်ပင်တိုင်းကြားရတာပေါ့။ ဒီတော့ ဆင်မင်းက သူ့ကိုလာသင်ပေးနေတယ်မှတ်ထင်သွားလေရဲ့။ ဆင်မင်း စိတ်ထဲမှာ ခိုးသူတို့စကားတွေ ကြီးစိုးလို့နေတာပေ့ါ။ ဒီတော့ ဆင်မင်းက အနားကပ်လာသော ဆင်ဦးထိန်းကို ဆော်လိုက်တာ ပွဲချင်းပီးသွားတယ်။ မြင်သူတိုင်းကို ရန်သူထင်နေတော့တာပေါ့။ ဒီအကြောင်းကို ပညာရှိအမတ်ထံ ပြောပြကြရတော့တာ။ ပညာရှိအမတ်က အကြောင်းအရာအားလုံးကို စုံစမ်းကြည့်တော့ ဆင်မင်း အတုယူမှားနေတာကို သိသွားတော့တယ်။ ဒီတော့ ပညာရှိအမတ်က သူတော်ကောင်း သမဏ ဗြဟ္မဏတွေကို ပင့်ဆောင်ပြီး တရားဓမ္မဆွေးနွေးစေလိုက်မှ သူတော်ကောင်းစကားတွေ ကြားနာရပြိး ဆင်မင်းက အရင်လိုပြန်ပြီးတော့ ယဉ်ကျေးသွားတော့တာပေါ့။
ဒီအအကြောင်းအရာတွေကို ဖတ်ပြိးတော့ အတွေးလေးတွေဝင်လာခဲ့တယ်။ အစက ယဉ်ကျေးပါသည် ဆိုသော ဆင်မင်းသည်ပင် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အရောင်ပြောင်းလဲသွားတတ်တာ။ အရိုင်းဓာတ်တွေ လွှမ်းသွားတာ။ အတုမြင် အတတ်သင်လို့ပေါ့။
အခုဖေစ်ဘွတ်ပေါ်မှာလည်း ကောင်းတာတွေရော မကောင်းတာတွေရော ကြုံတွေ့နေကြရတာပါပဲ။ တစ်ပိုင်းကြောင် ကျက်စာရရုံနှင့်
ထက်မာန အပြောသန်တယ် ဒေါသမာန်ထူပွား၊
စောဒက တုဘက်လာလျှင် သူ့ထက်ငါ ငြင်းတဲ့ လူစား…………
မပြောပလောက်တဲ့ စာပေဗဟုသုတလေးကို (လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာ)ပေါ်လစီစကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ရောယှက်ပြီး အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအတွက် ဆူးငြောင့်ခလုတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရဲ့ စကားလုံးတွေကိုပဲ အလွမ်းမိုးခံနေကြမည်လား။
ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာဆိုတာရှိရမယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာရှိရမယ် ဆိုတဲ့ ရေရှည် အတွေးအမြင်တွေနဲ့ တူးဖော်တည်ဆောက်နေတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စကားကိုပဲလိုက်နာကြမည်လား။ မိမိဘ၀ကို မိမိတည်ဆောက်တတ်နိုင်မဲ့ ဥာဏ်တွေလည်လိုပါတယ်(အတ္တသမာပဏိဓိပေါ့)။သွေးပြောသောစကားကို ကြားနာတတ်တဲ့ ပကတိနား၊ ဥာဏ်နားရှိဖို့လိုနေပြိနော်။အတုယူမမှားဖို့တော့လိုနေပြီ။
မင်္ဂလာဆင်မင်းဟာ ပညာရှိအမတ်ဟူသော သပ္ပုရိသူပနိဿယ=သူတော်ကောင်းကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်းကြောင့် အကုသိုလ်များ ထပ်မဖြစ်ပွားခဲ့တော့။
ဆိုတော့ ကိုယ်တွေလည်း ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆည်ကပ်ကြမလဲ။ အလေးနက်စဉ်းစားရမှာက ကိုယ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုက ပစ္စပ္ပန် သံသရာနှစ်ဖြာအကျိုးကို ခြောက်လန့်နေမဲ့ အလုပ်မျိုးမဖြစ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီတော့….ပဏ္ဍိတာနဉ္စ၊ သေ၀နာ။ ဧတံ မင်္ဂလမုတ္တမံ။ ပညာရှိကို ဆည်းကပ်မှီဝဲခြင်းသည် မင်္ဂလာ ဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားကိုလိုက်နာဖို့လိုလာပြီး။ သို့မှသာ ပစ္စပ္ပန်တမလွန် ဘ၀တွေလှနေမည်မဟုတ်ပါလား….။
မကောင်းသော အရာတွေကို မြင်၊ကြားပြီး အတုမြင် အတတ်သင်မဖြစ်ရလေအောင် ကိုယ်တွေဘ၀တွေကို စစ်မှန်သော လမ်းကြောင်းကို ညွှန်ပြနိုင်သော ပညာရှိတွေကို ဆည်းကပ်နိုင်ကြပါစေ….
Posted by မိုးညွတ်ခ at 2:19 AM 1 comments
ကမ္ဘာဦးအခါ ငှက်တွေက ရွှေဟင်္သာတွေကို မင်းအဖြစ် တင်မြှောက်ကြပါတယ်တဲ့။ ဟင်္သာမင်းမှာက တစ်ဦးတည်းသော သမီးပျိုလေးရှိပါတယ်။ ရွှေဟင်္သာမင်းက တစ်ဦးတည်းသော သမီးလေးကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက် ကြင်ဖော်ရွေးချယ်ခွင့် ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ ဟင်္သာမင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် ငှက်များအားလုံး ဟိမ၀န္တာတောင်ကျောက်ဖျာကြီးပေါ်မှာ စည်းဝေးကြပါတယ်။
ငှတ်အပေါင်းတို့ရဲ့ အလယ်မှာ ဟင်္သာပျိုမလေးက ပတ္တမြားအဆင်းနှင့်တူသော လည်တိုင် လှပဆန်းကြယ်သော တောင်ပံတို့ရှိသော ဥဒေါင်းကို ကြင်ယာအဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က ငှက်တွေက ကြင်ဖော်ရွေးခံရတဲ့ ဥဒေါင်းကို ၀ိုင်းဝန်းချီးကျူးကြတာပေါ့။ ကြင်ဖော်ရွေးခံရတဲ့ ဥဒေါင်းက ဘ၀င်မြင့်လာပြီး အတောင်ကိုဖြန့် အမြီးကိုကော့ထောင်ပြီး က တော့တာပေါ့။ ဒီတော့ မမြင်သင့်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အားလုံးမြင်သွားကြတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ ရွှေဟင်္သာမင်းက အရှက်အကြောက် ကင်းမဲ့သူအား ငါ့သမီးကို မပေးနိုင်ဆိုပြီး ရွေးချယ်ထားခြင်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ ထို့နောက် အမျိုးတူ ဟင်္သာတစ်ကောင်နဲ့ပဲပေးစားလိုက်တော့သည်။
ဒီမှာ စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ မတူတာလေးတွေဆိုပါတော့။ မိဘ အမြင်နဲ့ သားသမီးအမြင်၊ ယဉ်ကျေးမှုခြားနားတွေ…မျိုးနွယ်ခြားနားတာတွေ……….ပေါ့။
မိဘက တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးမို့ ချစ်လွန်းလို့ သမီးစိတ်ကြိုက် ကြင်ယာဖတ်ရွှေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ သမီးကလည်းငယ်ရွယ်သည့်အလျောက် အလှပဖတ်ကိုဦးစားပေးခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ ချစ်သမီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ကြင်ယာတော်ကို သတိထားကြည့်ရတော့တာပေါ့လေ။ ဒီမှာ အမြင်မတူမှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့။ ဇာတ်တွေခြားနားတော့ ယဉ်ကျေးမှုတွေခြားနားတွေကို ဖခင်က မြင်လာတယ်။ သမီးကတော့ အလှပကိုပဲဦးစားပေးခဲ့တာပေါ့။ ဖခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ အဆင်းလှပမှုတွေသည် ပဓာနမဟုတ်။ လောကပါလ တရားနှစ်ပါးထဲမှာပါတဲ့ ရှက်ခြင်း ဆိုတဲ့ တရားမဲ့နေတဲ့အတွက် ချစ်သမီး၏ ကြင်ယာရွေးချယ်မှုကို တားဆီးခဲ့သည်။ နောက်အမျိုးတူ ဟင်္သာတစ်ကောင်နဲ့သာပေးစားလိုက်တော့သည်။ ဤအချက်က ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် ဘုရင်ဟင်္သာမင်းရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြလိုက်တာပါပဲ။။ စာရေးသူအထင်ကတော့ ရွှေဟင်္သာမင်းက အမျိုးမတူမှုကြောင့် ချစ်သမီးရဲ့ ကြင်ယာရွေးချယ်မှုကို ဖျက်လိုက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရွှေဟင်္သမင်းက တခြားရွေးချယ်မှုတွေကို မပြုစေတော့ပဲ အမျိုးတူ ဟင်္သာတစ်ကောင်နဲ့သာပေးစားလိုက်ခြင်းကြောင့်ပါ။
ဤသို့လည်းစဉ်းစားမိသည်။ဘုရင်ကြီးအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ငှက်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောကြမှာပဲလို့ပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ငှက်ဘုရင်ကြီးအနေနဲ့ ငှက်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့ အပြောခံရမှာကို ဂရုစိုက်နေမယ်ဟု မထင်ခဲ့။ အကယ်လို့ ငှက်ဘုရင်ကြီးအနေနဲ့ ငှက်အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခံတာတို့ ငှက်အချင်းအချင်း စာနာနားလည်မှုမရှိဘူးဆိုတာတွေကို ထည့်စဉ်းစားပါက ငှက်ဘုရင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချုပ်အာဏာကို ထိပါးစော်ကားလာမည် မဟုတ်ပါလား သားသမီးနဲ့ပတ်သက်လာပီဆိုတော့လေ။ မျိုးမတူ၊ယဉ်ကျေးမှုတွေခြားနားတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းနှစ်ခုကြားမှာတော့ မပြီးနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပွားလာမှာပဲလေ။ ဆိုတော့ ငှက်ဘုရင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ သူ့ကို ငှက်အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့သူ၊ ငှက်အချင်းချင်းစာနာတဲ့စိတ်ထားမရှိတဲ့သူလို့ ပြောနေကြမှာကို သူဂရုမစိုက်နိုင်ပါဘူး။ အမျိုးကို စောင့်ရှောက်လိုသောစိတ်ဓာတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပါ။ အမျိုးသားရေးကိစ္စနဲ့ယှဉ်လာပါက အခြာသော ကိစ္စတို့သည် ဖွဲ စခွဲအဖြစ်သာ သဘောထားလိုက်သည်။ ဤကဲ့သို့စိတ်ထားများ မထားလိုက်ပါက သူ့ရဲ့အမှားသည် သားစဉ်မြေးဆက် အပြစ်တင်ခြင်းကိုခံနေရတော့မည်သာဖြစ်သည်။ ရွှေဟင်္သာဟူသော မျိုးနွယ်သည်လည်း ဂုဏ်ရောင်ပြောင်နေတော့မည်မဟုတ်တော့ပေ။ မျိုးဆက်သစ္စာဖောက်အဖြစ် ဂန္တ၀င်မှတ်တမ်းရေးထိုးခံနေရတော့မည်ဖြစ်သည်။
ယခုခေတ် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ မိဘများနမူနာယူသင့်တဲ့အချက်တွေပါပဲ။ အမျိုးမတူ ဘာသာမတူ ယဉ်ကျေးမှုမတူမှတော့ မည်သို့မျှစိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာကောင်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ။ “အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ ကိုယ်ချင်းစာနာမှုဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေအောက်သာ ပြားပြားမှောက်နေလိုက်ပါက မိမိတို့ အမျိုးဇာတ်၊ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံတို့ ကမောက်ကမဖြစ်နေကြရမည်သာဖြစ်သည်”။
ဆိုတော့ အမျိုးဇာတ်တို့ကြားမှာ သမိုင်းတရားခံ အဖြစ်ပဲခံမလား……အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ ကိုယ်ချင်းစာနာမှုဆိုသော အခွင့်မတူတဲ့သူတွေရဲ့စကားလုံးလှလှလေးတွေကိုပဲ ဂရုစိုက်နေကြမလား
ရွှေဟင်္သာမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို အတုယူနိုင်ကြပါစေ၊ မိမိအမျိုးဘာသာကို စိတ်မှန်စွာ သစ္စာရှိသော ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ…. မျိုးချစ်စိတ်ထက်သန်သော ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ……..
Posted by မိုးညွတ်ခ at 2:48 AM0comments
ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရာ၌ မှန်ကန်စွာဖြေရှင်းတတ်ဖို့ အရေးကြီးလှသည်။ ပြဿနာကို မှန်ကန်စွာမဖြေရှင်းတတ်လို့ ဒုက္ခရောက်သွားရှာသော အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကပေါ့။ အနာထပိဏ်သူဌေးအိမ်မှာ ရောဟိနီမည်သော ကျွန်မတစ်ယောက် ရှိခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ သူမအမေက သမီးရယ် ငါ့ကိုယ်ပေါ်မှာနားနေတဲ့ ယင်ကောင်လေးမောင်းပေးစမ်းပါလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ ရောဟိနီက ကျည်ပွေ့နဲ့ဆော်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ အမေလုပ်သူခများ ဒုခက္ခတွေခံစားပီး သေသွားရှာတယ်။ အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘုရားရှင်က အတိတ်မှာလဲ ဒီလိုအလားတူအဖြစ်ပျက် ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘုရားလောင်းသူဌေး ကောက်ချက်ချလိုက်သည်က ဒီလောကမှာ ရန်သူပင်ဖြစ်သော်လည်း ပညာရှိသော ရန်သူသည်သာ အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏ လို့ပေါ့။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြီးတော့ ဒီလိုလေးတွေးမိတယ်။ အမိမြေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာမှာ ရန်သူက ပညာရှိသလား? ဒီမေးခွန်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမိတော့ အမိမြေမှာဖြစ်နေတဲ့ အမိမြန်မာလူမျိုးတွေကို သနားလိုက်တာ။ ဘုရားလောင်းကောက်ချက်ချတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေလို့ပါ။
နောက်တစ်ခုက အမိကစေခိုင်းလိုက်တာကို သမီးဖြစ်သူက ဖြေရှင်းနည်းမှန်ကန်စွာမသိလို့ အမိဒုက္ခရောက်သွားရတာလေ။ ဒီလိုပဲ ပြည်သူသာအမိ၊ ပြည်သူသာအဖ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အရ မိဘဖြစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကသားသမီးတွေကို စေခိုင်းနေပြီလေ။ ဒီတော့သားသမီးဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်စောင့်ရှောက်ရတဲ့ သူတွေက ကိုယ့်အမိစေခိုင်းတဲ့တာဝန်ကို မှန်ကန်စွာဖြေတတ်ဖို့လိုလာပြီ၊ ကိုယ့်အမိချမ်းသာစွာရှိဖို့လိုလာပြီ။ ဇာတ်တော်ထဲကသမီး ဖြေရှင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းမိတယ်။ ပြီးဒီတော့ ဆန္ဒတစ်ခုလည်း ဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ့်အမိကို စစ်မှန်စွာချစ်တတ်သော သားကောင်းသမီးမြတ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ပေါ့……။
အမိပြည်သူ ပြည်သားများ အားလုံး အေးချမ်းသာယာရှိပါစေ……………………..မိုးညွတ်ခ
Posted by မိုးညွတ်ခ at 2:12 AM0comments
အပေးအယူနဲ့ပတ်သက်လို့စကားပုံတစ်ခုကြားဖူးသည်။ ပန်းပေးရင်အလှမ်းဝေးတယ်၊ ပေးတတ်ရင်နီးစပ်ပါတယ် …ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
လောကမှရှိတဲ့သူအားလုံးကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို အကောင်းဆုံးတွေ၊ အလှဆုံးတွေကိုပေးချင်ကြတာ မဟုတ်ပါလား…။သို့သော်တစ်ခါတရံမှာ…တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့် စေတနာကိုဝေဒနာထင်သွားတတ်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်…။ အခုလည်းကြည့်ပါအုံး…ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းကတော့…သူချစ်တဲ့ မိဖုရားနှစ်ပါး…လှပါစေတော့..မွှေးပါစေတော့…ဆိုပြီး..အင်ကြင်းပင်ကိုဦးကင်းနဲ့အသာလှုပ်ပြီးပန်းတွေကိုကြွေစေခဲ့ပါတယ်။ ဆင်မင်းကတော့စေတနာတွေနဲ့ပါ။ အဲဒီမှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ စူဠသုဘဒ္ဒါအပေါ်ကျတော့ ခါချဉ်ကောင်တွေကျသွားလေရဲ့….။လေတိုက်လို့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သွားတာပါ။ ဆင်မင်းကတမင်ရည်ရွယ်ခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ စူဠသုဘဒ္ဒါကတော့ တမင်ရည်ရွယ်တယ်လို့ထင်မှတ်ပြီး အငြိုးအတေးတွေထားခဲ့တာ ပေါ့။ အမုန်းတရားတို့ပေါက်ဖွားခဲ့တော့တာပါပဲ။ ချစ်ခင်မှုနယ်ပယ်ဝေးသွားတယ်ဆိုပါတော့။
ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းပေးလိုက်တာကတော့ အနှစ်မပြယ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပါ။ စူဠသုဘဒ္ဒါကတော့ အချစ်ခွန်အား ပေးသနားတယ်လို့မထင်ပဲ အမုန်းခွန်အားပေးသနားလိုက်တယ်လို့ထင်မှတ်သွားတာပေါ့….။
(ဒီအကြောင်းရာတွေကိုကြည့်ပြီး ပန်းပေးရင်အလှမ်းဝေးတယ်လို့များ တင်စားလိုက်ကြသည်လား)
ဟေး……ဘော်ဒါတို့ရေ………….ပြီးလည်းပြီးခါနီးပြီ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်လည်းကြွလာခါနီပြီး အားထည့်လိုက် ကြဦးစို့၊……..ဒါတွေကတော့ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်ကြွမြန်းလာမည့်လမ်းကိုပြင်ဆင်နေကြတဲ့ လုပ်အားပေးအဖွဲ့ရဲ့အသံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်….ဒီအချိန်မှာ အများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ သူတစ်ယောက်က လုပ်အားဒါနပါဝင်ဖို့ခွင့်တောင်းလာပါတယ်….သူလာတာကိုက ကောင်းကင်ခရီးကနေလာခြင်းရယ်ပါ။ လုပ်အားပေးအဖွဲ့ကလည်းဒီလူပါဝင်ရင်တော့ သူ့တန်ခိုးနဲ့အမြန်ဆုံးပြီးမှာပဲလို့ယူဆပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်. ထူးဆန်းတဲ့သူကတော့ အလောင်းတော်သုမေဓာအရှင်ရသေ့ရယ်ပါ။ အရှင်ရသေ့က တန်ခိုးနှင့်မလုပ်ဆောင်ပဲ အများနည်းတူ ကာယာဒါနအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်ကြွလာသည့်အခါ ရေမြောင်းအနည်းငယ်ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျန်နေတဲ့ ရေးမြောင်းအပေါ်မှာ သုမေဓာရသေ့က ခန္ဓာကိုယ်ကို တံတားသဖွယ်ပြုလုပ်ပြီး ဘုရားနှင့်တကွသော နောက်ပါသံဃာတော်အပါးလေးသိန်းတို့ဖြတ်ကြွဖို့ လျှောက်ထား ပါတယ်။ ဒါကတော့ ဘုရားလောင်းတော်တို့သာဖြည့်ကျင့်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပါ။ လေးသိန်းသော သံဃာတော်များ နင်းကြွမြန်ပါက အသက်ပါ ပါသွားနိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ အလောင်းတော်အနေနှင့် မိမိတကိုယ်ရေတကာယ အတွက်ဆိုလျှင် တစ်နေရာထဲပင်လျှင် အရဟတ္တဖိုလ်ရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အများသတ္တဝါတွေအကျိုးကို သယ်ပိုလို၍ သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်အဖြစ်ကိုဆုပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်ကလည်း လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာ တစ်သိန်းအထက်မှာ ဂေါတမဘုရားဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားရှင်လာမည်မို့လာရောက်ဖူးမြှော်ကြသော ပရိသတ်အတွင်း၌ သုမိတ္တာအမျိုးသမီးလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ သုမိတ္တာသည် အလောင်းတော်ကို မြင်လျှင်မြင်ချင်းကတည်းကပင် ချစ်ခင် မြတ်နိုးသည့် စိတ်ပေါ်နေခဲ့သည်။ အရှင်ရသေ့အားဘုရားရှင်အားလှူဒါန်းဖို့ရန်ယူဆောင်လာခဲ့သော ကြာပန်း ရှစ်ခိုင်ထဲမှ ကြာငါးခိုင်အား အရှင်ရသေ့လှူဒါန်းရန်ပေးအပ်ပါ၏…ကျန်သုံးခိုင်ကတော့ အကျွန်ုပ်လှူဒါန်းရန်အတွက် ဖြစ်ပါစေ..ဟု ပြောဆိုလှူဒါန်းပြီး အရှင် ရသေ့ အရှင်သည် ဘုရားဖြစ်ဖို့ရန် ပါရမီတော်တို့ကို ဖြည့်ကျင့်နေသမျှ ကာလအတောအတွင်း ကျွန်ုပ်သည် အရှင်နှင့်အတူတကွ ညီမျှသောဖြစ်ပါရစေသတည်း…..ဟု ဆုပန်ခဲ့သည်။
ဒီအဖြစ်ပျက်ကတော့……ပန်းပေးရင်အလှမ်းဝေးတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုစကားရဲ့ဆန်းကျင်ဘတ်…ပေးတတ်ရင်နီးစပ် ပါတယ်……လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်…….
ဒါကတော့ လောကဆိုရိုး တစ်ခုကိုဆန်းစစ်ကြည့်ယုံပါ…..ဒါလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ ဒီလိုကောက်ချက်ချမိ သည်…အမှတ်မထင် မရည်ရွယ်ပဲမှားခဲ့တဲ့ မှားသွားတဲ့အရာတွေကတော့ ရှိကြမှာပါ။ အကယ်လို့ ဒီလိုအမှား တွေကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင် စိတ်ထဲမှာ အကြာကြီးအငြိုးအတေးတွေ၊ အာဃာတတွေမထားမိဖို့လိုပါတယ်….။အကယ် လို့ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်…..မေတ္တာတွေခန်းခြောက်သွားမှာစိုးလို့ပါ။
အစမထင်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့သံသရာကြီးထဲမှာ….ချစ်ခဲ့သူတွေ၊ မုန်းခဲ့သူတွေဆိုတာ ဖြစ်ခဲ့ကြမှာပဲ…။ဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ ရှိခဲ့တာတွေ ဖြစ်ပါစေတော့၊ ရှိပါစေတော့အသိဥာဏ်ရှိရှိဖြစ်နေရတဲ့ အခုဘဝအခုချိန်မှာတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အမှားတွေကို ခွင့်လွတ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့…..ဒါမှသာလျှင် စိုသော လက်တို့မခြောက်ခန်းမှာမဟုတ်ပါလား…
ယခုပစ္စပ္ပန်ဘဝမှာ သူ့အကျိုး ၊ ကိုယ့်အကျိုး အပြန်အလှန်ဆောင်ရွက်ခြင်း….လို့ရယ်ပေါ့။
Posted by မိုးညွတ်ခ at 12:16 AM0comments
တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပြန်လေပြီ။ နှစ်သစ်ကူးအထိန်းအမှတ်အဖြစ် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြသည်။ သင်္ကြန်ဟူသည်က သင်္ကန္တ-ဆိုသော ပါဠိစကားလုံးမှ ...